SharePoint क्यारियरका लागि अर्को चरण: व्यवस्थापन र विकास
SharePoint क्यारियरको लागि अर्को चरण
यस तरिकामा, तपाइँसँग तपाइँको SharePoint शर्त डिजाइन गरिएको छ र सानो बिरालो जस्तै धमिलो बनाउने छ। निर्देशकहरूले तपाईंलाई समन्वित प्रयासमा ठूलो परिवर्तनमा प्रशंसा गर्छ, र यसको अलावा कुनै पनि ठाउँबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न क्षमता। तपाईंले केही अरूलाई जित्न सक्नुहुन्छ, बधाई छ!
दृढतापूर्वक, सामान्य अन्वेषण पछि लेनेछ ...
के इन्टरफेसले हाम्रो संगठनको नजरमा टेबेड गर्न सक्छ?
के हामी यो हाम्रो अन्य सफ्टवेयरसँग जोड्न सक्छौं?
के हुन सक्दछ कि यो प्रक्रियाको लक्ष्यको साथ सुव्यवस्थित हुन सक्छ जसलाई यसको तैयारी गर्न आवश्यक छैन?
यो प्रशंसनीय रूपमा काम गर्दछ जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ, अझै यो राम्रो उपाय हुनेछ यदि ...
यी अन्वेषणहरूको जवाफ प्रायः व्यवस्थापकको अनुकूलन भाग अघि बढि प्राप्त हुन्छ र तपाइँलाई केहि समयको लागि कुनै पनि घटनामा तपाइँका डिजाइनर शीर्ष पहिरन लगाउन आवश्यक छ। जस्तो कि हुनसक्छ, होल्ड गर्नुहोस् ... तपाईं डिजाइनर होइनन्।
सुधारको लागि एक उपयोगी कदम एक बहुविध प्रक्रिया हो जुन प्रारम्भिक मा अधिकृत हुन सक्छ, तर एक सभ्य व्यवस्था र सही तयारी संग पुग्न यो सरल छ। तपाईंको जित्ने माइक्रोसफ्ट MCSD: एप बिल्डर प्रमाणीकरण, तपाईं आफैले सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीं SharePoint सुधारको सामर्थ्य जटिलताहरू संभाल्न। इनामको रूपमा, तपाइँ अतिरिक्त रूपमा केहि महत्त्वपूर्ण व्यापार सुरक्षा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। यसको एक भरोसेमंद तथ्य हो शेयर बिन्दु ईन्जिनियरहरू यस समयमा एक असाधारण खोज छन्!
चाहे तपाईं एकल प्रणाली वा काम गर्नुहुन्छ शेयर बिन्दु खेत, तपाईं बिना असम्भव छ भने तपाईंको सङ्गठनको आवश्यकतालाई समन्वय गर्नको लागि असंख्य घण्टाले तपाईको सर्भरको अवस्था डिजाइन गर्न संसाधनहरू राख्दछ। एसपीको निरन्तर संरचनाको यो सिकाइले तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण स्थिति प्रदान गर्दछ जब यो सुधार गर्न उत्प्रेरित हुन्छ। तपाईंसँग अहिलेसम्मको कसरी माथिको शीर्षको बारेमा बुझ्न सकिन्छ शेयर बिन्दु प्रकार्यहरू र यसले तपाईंको संगठनमा कस्तो चासो राख्छ।
धेरै समय, त्यहाँ कुनै पनि कोड आवश्यक पर्दैन SharePoint को साथ क्षमताहरू छन्। यो कस्टम अनुकूलन निर्माण गर्न बर्बाद हुनेछ जब SharePoint आफै भित्रको शक्ति अब अवस्थित छ। यी रेखाहरु संग, यो SharePoint को लागि दिलचस्प छ कि संरचना संरचना मा एक फर्म ह्यान्डल प्राप्त गर्न एक स्मार्ट विचार हो, उदाहरणका लागि, साइट संचय, अनुप्रयोगहरू, प्रविष्टिहरू, तहहरू र रेकर्ड। तपाइँलाई समान तरिकाले आफूलाई SharePoint को परिवर्तन गर्न यन्त्र, माइक्रोसफ्ट अफिस SharePoint डिजाइनरसँग सम्भावित हुनुपर्छ। यसले विभिन्न अनुकूलनमा समावेश गर्दछ कि यसमा कार्यान्वयन गर्न कुनै प्रोग्रामिङ आवश्यक छैन।
तपाईं केहि अन्तर्दृष्टि-विशेष अनुदेशिक कक्षाहरूको साथ आफ्नो अन्तर्दृष्टिको विकास गर्न सक्नुहुन्छ। यी पाठ्यक्रमहरूले ट्र्याकमा तपाईंलाई SharePoint विकासमा सार्नको लागि ग्यारेन्टी दिईरहेका छन् कि तपाईसँग बुझ्नको स्तर स्तर SharePoint को लागि उत्पादक र व्यवयोग्य कोड रचना गर्न महत्त्वपूर्ण छ:
माइक्रोसफ्ट SharePoint सर्भर 2013 70-331 कोर्स मौलिक स्थापना र व्यवस्था समावेश गर्दछ। सम्भावनाको बाबजुद तपाईले अब यस जानकारीको गतिमा एकदम थोडा सेट गर्नुभयो, तपाईं बुझ्नको विस्तारित ग्यारेन्टीले यो कोर्स दिनुहुन्छ।
जब तपाइँ जेडाइ मास्टरमा SharePoint Padawan बाट प्रगति गर्न तयार हुनुभयो, अधिक प्रगतिशील Microsoft SharePoint सर्भर 2013 70-332 कोर्स त्यहाँ पुग्नुहुनेछ! यो कस्टम नेटवर्क समाधान, वास्तविक सञ्जाल प्रशासक सहित SharePoint जडान गर्न को लागी असाधारण योजना को लागी तपाईंको अन्य डेटा प्रणाली संग जोडने को लागि असाधारण योजना हो।
एक पुरस्कारको रूपमा, यी पाठ्यक्रमहरू तपाइँले सम्बन्धित माइक्रोसफ्ट परीक्षाहरूको लागि सेट अप गर्नुभयो जुन तपाइँले तपाइँको MCSE मा थप्न चाहानु भएको छ: उत्पादकता संग्रह।
MCSD तिर निम्न दिशा: एप बिल्डर प्रमाणीकरण एक प्राप्त गर्न हो MCSA: वेब अनुप्रयोगहरू वा MCSA: युनिवर्सल विन्डोज प्लेटफार्म प्रमाण। तपाईं या तो उठा सकते हो, को रूपमा दुवै SharePoint सुधार को लागि उचित छ। वास्तवमा, यो पछि लाग्न दु: ख हुन सक्छ।
त्यहाँ दुई परीक्षा आवश्यक पर्दछ MCSA प्रमाणीकरण, र तपाईंलाई तयारी गर्ने एकदम धेरै आवश्यकता पर्दछ र ह्यान्ड्स-प्रथा को एक पर्याप्त समझ को लागी उठाएको छ ASP.NET or सी # प्रोग्रामिंग। भिजुअल स्टुडियोले तपाईंलाई SharePoint अनुप्रयोगहरूको उदाहरणहरू डाउनलोड गर्न सक्षम बनाउँछ, र माइक्रोसफ्टले विस्तृत थोरै परिस्थितिको विस्तृत विविधतालाई लुकाउँछ। यी प्रशिक्षक ठेकेदारहरूको साथ, आफैलाई जस्तै एक पूर्ण प्रशासकले आँखाको झिल्लीमा तपाईंको प्रगतिको रिक्तता बढाउन सक्छ।
एक पटक यी शब्दहरू समाप्त भएपछि, तपाईं आफ्नो पूरा गर्न सक्नुहुनेछ एप बिल्डर प्रमाणपत्र Microsoft SharePoint सर्भर 2013 कोर समाधान परीक्षा पास गरी प्रमाणीकरण गरेर। यो परीक्षाले तपाइँको सङ्गठनको आवश्यकताहरूमा SharePoint स्थापनालाई स्वेच्छात्मक रूपमा टे्वीक गर्न प्रोग्रामिंग र नो-कोड समाधानहरू प्रयोग गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
सडकमा एप बिल्डर प्रमाणीकरण एक असाधारण रमाइलो गर्ने प्रशिक्षक अनुभव हुन सक्छ। एक पटक देखा पर्दा समस्याहरू अब अनुचित हुन सक्छ अब कोडको केवल दोहोरो लाइनहरूसँग बसोबास गर्न सकिन्छ। तपाईंको संगठनको मुनाफा लिन्छ किनभने तपाई आफ्नो नयाँ इन्जिनियरलाई खुसीसाथ लुगा लगाउन सक्नुहुन्छ!
MCSE उत्पादकता प्रमाणन पाठ्यक्रम
माइक्रोसफ्टको भूतल ल्याप्टप इनबल्ट विन्डोज 10 एस: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुविधाहरू